Horjooge sare oo ka tirsan Shabaab oo ku geeriyooday duqeyn galabta ka dhacday gobolka Gedo – Radio Muqdisho
Horjooge sare oo ka tirsan Shabaab oo ku geeriyooday duqeyn galabta ka dhacday gobolka Gedo
Duqeymo dhinaca cirka ah oo lala eegtay horjooge ka tirsan kooxda gummaadka ummadda Soomaaliyeed ayaa galabta ka dhacday gobolka Gedo.
Guddoomiyaha degmada Buur-dhuubo ee gobolkaasi Xasan Maxamed Xasan ayaa laanta Afka Soomaaliga ee VOA u xaqiijiyay in duqeeymahaasi uu ku geeriyooday horjooge Sare oo ka tirsan kooxda Shabaab, kaasoo uu magaciisa ku sheegay Aadan Garaas, wuxuuna kooxda u qaabilsanaa dhinaca sirdoonka.
Duqeynta ayuu sheegay in ay galabta ka dhacday deegaan lagu magacaabo Aqab-buul oo u dhaxeeya degmooyinka Diin-soor iyo Baar dheere oo ka kala tirsan gobollada Baay iyo Gedo.
Gudoomiyaha degmada Buurdhuubo Xasan Maxamed Xuseen oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in duqeynta oo dhacday galabta sagaalkii saac, kadib markii diyaaradaha an duuliyaha wadin ee Mareykanka ay gantaal la eegteen gaari uu watay horjooge Aadan Garaase oo marayay meel 40 kiilo mitir bari kaga toosan degmada Baardheere.
“dadka deegaanka iyo hey’ado kale oo sirdoon ah oo annaga halkaasi noo jooga ayaa xaqiijiyay in uu duqeyntaasi ku geeriyooday nin la yiraahdo Aadan Garaas oo reer Gedo ahaa kana mid ahaa horjoogayaasha sar sare ee shabaab iyo nin la socday oo gaari yar watay oo isana la dhintay horjoogahaasi” ayuu yiri gudoomiyaga degmada Buurdhuubo.
Duyaaradaha Mareykanka ooh ore duqeymo noocan oo kale ah ugu dilay horjoogayaal ka tirsanaa kooxda Shabaab kuwaasoo uu ka mid ahaa horjoogihii kooxda Axmed Cabdi Ow Godane oo sanadkii hore lagu dilay gobolka Sh/Hoose.